Ndezvipi zviri nani, zvese-mu-imwe komputa kana komputa desktop? - Nhau - Shenzhen VisionVision Technology Co LTD
Imba > Nhau > nhau dzekambani > Ndezvipi zviri nani, zvese-mu-imwe komputa kana komputa desktop?
Ndezvipi zviri nani, zvese-mu-imwe komputa kana komputa desktop?
Zvese-mu-zvimedu uye madhesiki ataurwa pano anoreva makomputa, ese-mukati, sekutaurwa kwezita, ndiko kusanganisa kwechidzitiro nemubati, zvichiita kuti zvibatanidzwe. Iyo komputa desktop yakakamurwa kuita Yekugamuchira uye chassis, ayo aripo zvakasiyana Kana iyo inomiririra yagadziriswa, iyo skrini inogona kutsiviwa, uye zvinopesana.
1. Kugara munzvimbo
Iwo-wese-muchina muchina zviri pachena kuti yakawanda-yekuchengetedza-nzvimbo nekuda kwekubatanidzwa kweiyo inomiririra uye skrini, uye huwandu hwenzvimbo yainotora inowanzoenderana nehukuru hwechidzitiro. Iyo zvakare inoderedza tambo yekubatanidza, iyo inogona kuita kuti desktop iwedzere kutsvinda.
Komputa yedesktop inoumbwa nezvinhu zviviri zvakakosha: mainframe uye a chidzitiro. Pamusoro pezvinhu zvinokanganisa saizi yesikirini, mainframe inogona ive hombe kana diki, uye iwo mwero wekuita munhu wakakwira. Netambo izvo zvinofanirwa kuve nehukama, akawanda madhesiki ari nani pane ese-mune-iwo Tora kumusoro imwe nzvimbo.
2. Hardware uye mashandiro
Izvo zvakare nekuda kweiyo yakakwira degree yekubatanidzwa. Nekuda kwekukamisirwa yenzvimbo yemukati, mazhinji ese-mukati-anoshandisa nharembozha processor kana makadhi emifananidzo, ndangariro nezvimwe zvekushandisa. Iyo yekupisa kupisa dhizaini inodzorwawo, saka maererano nekuita, kumisikidza kumwe kuri Pazasi, ese-mu-one makomputa ari pasi zvishoma pane komputa makomputa. Uye zvimwe zvese-mu-izvo zvinongosangana chete zvakakosha zvinodiwa. Semuenzaniso, zvese-mu-zve zvekushandisa muhofisi zvinogona kunge zvisina kunyanya kushata kupfuura hofisi notibhuku.
Desktop makomputa anogona kugadzirwa zvisingaite nekuda kwechassis, uye iyo nzvimbo mune huru chassis yakakura, zvirinani maererano nekupisa kupisa kupisa, senge kushandisa yakakura saizi fan, kana kunyangwe mvura inotonhora system. Nekuda kweiri nani kupisa dhizaini dhizaini, mashandiro eiyo Hardware anogona kuitiswa zvakatowanda, uye kunyangwe iyo yekuwedzeredza dhizaini, saka iko kuita kwekuita kweye desktop desktop kuri pachena zvakanyanya.
Iyo yese-mu-imwe ichinyatso kuve hombe-screen notibhuku, uye yayo yemukati nzvimbo inogumira. Kunyangwe vamwe vese-mune-avo vanoshandisa paneboardboard memory kana solid-state hard disk mhinduro dzekumanikidza saizi yemuchina wese. Iyo processor uye mifananidzo Kadhi harigone kutsiviwa. Iko hakuna nzvimbo yekuwedzera mune yakadaro-mu-imwe muchina. Kunyangwe ikashandisa yakazvimirira memory kana hard disk, iyo nzira yekukatanura yeakawanda-mu-iwo anonetsa zvikuru uye haana kukodzera kune vese vashandisi ku kukatanura. Saka kana uchinge wasarudza zvese-mu-one, iwe unotoishandisa ku magumo.
Asi kumakomputa emakomputa, kukura kwayo kwakapfuma. Pamusoro pe kutsiva kuratidzwa kwemhando dzakasiyana siyana nemhando, dhizaini yemahara inogona zvakare kuwana zvakanyanya kuwedzera kuwedzera kana kutsiva, senge ma processor, mifananidzo makadhi, makadhi eruzha, Kune zvakawanda zvingasarudzwa zvegrafiki kadhi, ndangariro, hard disk, fan, nezvimwe. Unogona kugadzira komputa yedesktop iri yako zvachose zvinoenderana nebhajeti rako uye zvaunoda. Kusanganisira iyo yakazara kuita kweiyo bhokisi guru.
Chinhu chikuru apa iko kurerukirwa kwekugadzirisa uye kugadzirisa pa Hardware chikamu.
Zvese-mu-imwe makomputa hazvigadzirisike maererano nehurdware, nekuti mazhinji acho ari akabatanidzwa pane mamaboardboard, saka zvinokanganisa muviri wese, izvo zvinogona kureva kutsiva iro rese mamaboard. Nekuda kwehunhu hwayo uye kusangana, zvinogona kunge Zvichatarisana nedambudziko rekushomeka kwezvishongedzo, zvekuti ivo vanofanirwa kusiya zvese.
Mazhinji emabhokisi makuru emakomputa edesktop anoshandisa-isina-disassembly, uye zviri nyore kuvhura iyo chifukidziro chekuchengetedza kwemukati, senge kubviswa kweguruva uye kutsiva zvikamu.
Mumamiriro ezvinhu akajairwa, zvisinei kuti iri desktop kana zvese-mu-one, kunze kwemabhuku ekunyorera, kufamba hakuna kubatanidzwa. Asi isu tinogona zvakare kutarisana nekubata kwekufambisa, kuchinjisa, nezvimwe, ipapo mune ino kesi, kufamba kwacho kuri nyore kwazvo kune ese-mu-mumwe michina.
Kunze kwekhibhodi, mbeva uye zvimwe zvinongedzo, kumisikidzwa kweyemuchina-we-mumwe wakasanganiswa nechiratidziro, uye huremu hwemuchina wese hwakareruka. Chero bedzi magetsi achichengetwa, inogona kutakurwa zviri nyore, kunyangwe iri masendimita makumi maviri nemana. , 30 inches, kusanganisira vasikana vanogona kutora nyore.
Nekudaro, komputa makomputa akapatsanurwa kuita mainframes uye masikirini, uye mazhinji edesktop chassis akagadzirwa nesimbi yakachena, iyo inorema kwazvo. Uye zvakare, iyo yemukati Hardware inosanganisirawo hombe magetsi, fan, yakajeka discrete kadhi, uye yakakura saizi yemuchina hard disk uye optical drive. Mirira, imwe chete inomiririra inogona kunge iri makumi emakirogiramu. Kana iri desktop yakasarudzika, yakasarudzika, zvakanyanyisa kuoma kufamba.
Chechitanhatu, ndeupi musiyano wekuda pakati pekomputa-mu-one uye kombiyuta yedesktop
Pamusoro pekusiyana kwechitarisiko uye negadziriro yehardware, muchokwadi, kuvapo kwemakomputa ese-mu-mumwe zvechokwadi hakugone kuparadzaniswa kubva kudiwa.
Chekutanga pane zvese, maererano nechitarisiko, iyo-ye-yega inowedzera kuchengetedza nzvimbo, uye chimiro chiri nyore uye chine fashoni chakanakisa kwazvo kungave kuri muhofisi kana mumba, kuchipa vanhu manzwiro akachena.
Nekuda kwekubatanidzwa kwepamusoro kweese-mu-mumwe muchina, iyo "shrinkage" mukati iyo yekumisikidza Hardware zvakare inogumira mashandiro ayo. Semuyenzaniso, yepamusoro-yekuita zvinodiwa senge nyanzvi yekudhirowa, mifananidzo uye mufananidzo kugadzira, mitambo mikuru, nezvimwewo, zvemuchina-mumwe-mumwe watambanudzwa. . Asi zvezuva nezuva zvewebhu kubhurawuza, musangano wevhidhiyo, gwaro kugadzira, email kugadzira, yakajeka graphic dhizaini, uye online vhidhiyo kuona, iyo yese-in-imwe muchina uchiri kukwana. Zvichitaurwa zviri nyore, iyo-ye-imwe yakatetepa uye yakapfava hofisi notibhuku mukabhuku. Izvo hazvidi zvine simba kuita, asi inogona kusangana nezvinodiwa zvehofisi zvezuva nezuva.
Asi kana iwe uchibata mune vagadziri, chirongwa chekuvandudza, modelling rendering, vhidhiyo kugadzirisa, kusimudzira mutambo, nyanzvi e-mitambo, nezvimwe, kuda kwekuita kwemacomputer kwakanyanya kwazvo, saka chete desktop dzemakomputa kana kunyange server-chikamu makomputa anogona kuzviita. .
Muchidimbu, kunyangwe iri yese-mune-imwe kana desktop, pakupedzisira inoenderana nezvinodiwa nevashandisi. Zvino, iwe unofanirwa kuziva kuti sarudza zvese-mu-imwe kana desktop, handiti?
Yapfuura:Multi-basa kushanda kwekubata mumwe muchina